एक पुरुष इन्जियर यौनकर्मीको वास्तविक कथा !
प्रकासित मिति : २०७६ कार्तिक २०, बुधबार १२:१४ प्रकासित समय : १२:१४
हो, अतितले मलाई धेरैपटक बिझाउँछ । यो मेरो जीवनको यस्तो अध्याय हो जुन म मरेपछि पनि कहिले पनि परिवर्तन हुनेछैन । बीबीसी
कोहलपुर, पछिल्लो समय श्रावण लागे संगै केही समय यता भिभिन्न किसिमका तिजका गितहरुले माहोल
मित्र हो ! बोल्न सक्दैनौँ, सहिदिन्छौँ निरन्तर ! मित्रको भेषमा हुन्छ बारम्बार ठगी तर
दाङको आरोग्य ड्रिङ्किङ्ग वाटरमा भेटियो गुहिये किरा